New simba mota bhatiri aluminium kesi - Xuzhou Hanyu Aluminium Viwanda Co, Ltd.
Nyowani simba mota bhatiri aluminium kesi
1. Iyo aluminium shell yeitsva simba mota mota bhatiri ine yakakwirira yakasimba simba, yakatarwa modulus, kupwanyika kuoma, kupera simba uye kusagadzikana kwekurwisa kudzikama. Nekuti aluminium alloy zvinhu zvine yakadzika density, isina-magineti, alloy inogadzikana pamhepo tembiricha yakadzika, yakaderera yakanangana nemagineti simba, mhepo yakasimba kusimba, uye nekukurumidza kukurumidza kuwana kweiyo yakasimudzira radiation simba.
2. Iyo yekumusoro kurapwa kwebhetiri aluminium kesi inonyanya kusarudzika kupuruzira, uye ruvara rwayo zvakare rakapfuma kwazvo. Mavara ayo anowanzo kuve akachena-grey, grey grey, nhema, uye giraundi rehondo.
3. Iyo bhatiri aluminium kesi ine zvayakanakira aluminium alloy, saka zvakare yakareruka uye inogara kwenguva refu kana yaumbwa.
4. Iyo aluminium kesi yebhatiri yakanyanya plastiki, uye kugadzirwa kwayo kuri nani pane mamwe mafaera, uye zvakare ine zvakanaka zvinowoneka, saka ine zvakanaka zvinobatsira mukugadzirwa.
5. Iyo bhatiri aluminium kesi ichagadziriswa neanopisa uye anotonhora maitiro. Iyo bhatiri aluminium kesi yakagadzirwa nenzira iyi ichave yakasimba corrosion kuramba. Nekuda kweizvozvo, iyo aluminium kesi yebheti inonyanya kudzivirira.
6. Iyi aluminium shell ine zvakare yakanaka ductility, iyo inogona kugadzirwa muchiedza alloy ine akawanda masimbi zvinhu, uye zvinyorwa zvirinyore. Zvaro zvemakemikari zvakagadzikana, zvisiri zvemagineti, zvinogona kusevenzeswazve uye kushandiswazve, uye inofanirwa uye inogadziriswazve simbi. Uye density diki, yakajeka kujeka, ndiye mutambo wakanakira wemagetsi emagetsi mota.